Ungayifaka Kanjani i-Influencer, i-Blogger, noma i-Journalist | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 13, 2020 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 Douglas Karr
Esikhathini esedlule, ngibhale mayelana UNGAYI ukufaka kanjani i-blogger. I-saga iyaqhubeka njengoba ngithola ukusakazwa okungapheli kwemisebenzi yobudlelwano bomphakathi engazilungiselele engenalo ulwazi engiludingayo ukukhuthaza imikhiqizo noma izinsizakalo zamakhasimende abo.
Kuthathe isikhashana ukuthola iphimbo ebelifanele ukukhonjiswa. Ngithole i-imeyili evela kusomaqhinga wezokuxhumana nabantu nge I-Supercool Creative. ISupercool iyinkampani yezobuciko egxile ekuqambeni nasekukhiqizeni amavidiyo aku-inthanethi, ukumaketha ngegciwane, ukuhlwanyela ividiyo, imikhankaso yemidiya yokuxhumana ehlanganisiwe, amavidiyo egciwane, ukuzijabulisa okunophawu kanye nama-webisodes. Le i-imeyili engakholeki!
Izici ze-Great Blog Pitch
Inkundla yayikhona ngezifiso. Imvamisa ngithola ukusikwa kwengubo bese ngiyinamathisela. Ngisusa lezo zinkundla ngokushesha. Uma ungakwazi ukufunda ukuthi ngingubani, kungani kufanele ngikulalele?
Ukuphamba ngamafuphi ungitshela imininingwane. Iningi labantu be-PR limane lisike futhi linamathisele ukukhishwa kwezindaba okungenangqondo emzimbeni we-imeyili.
Iphimbo linikeza nge Ukucaphuna ukungena ngqo kokuthunyelwe yibhulogi yami!
Iphimbo lifaka phakathi ukuxhumana nendaba yangempela (nalapho ngingakhomba khona futhi ngikhombe izivakashi zami).
Inkundla iyangitshela izindlela ezahlukene Ngingasebenzisa imininingwane! Yilapho ngacweba izinyembezi… ngaphunga. Ake ucabange ukuthi… ukonga isikhathi, uDarci ubesevele ucabangile ukuthi ngingenza kanjani ngokuthola ulwazi ... futhi engeza inothi ukuze ngimthinte uma nginemibuzo.
Iphimbo lihlinzeka Isizinda kuchwepheshe nokuthi kungani ebaluleke ngokwanele ukuthi angalalela.
Inkundla ivalwa ngekaDarci igama langempela, isihloko, nenkampani (engikwazi ngisho Buke phezulu!)
Iphimbo line- ukuphuma! Abantu be-PR bavame ukuthumela ama-imeyili wokusika nokunamathisela ngaphandle kwe-Outlook - ngqo ukwephula isenzo se-CAN-SPAM.
Le i-imeyili esondele kakhulu… Ngingayilinganisela ku-B + eqinile. Okuwukuphela kolwazi oluncane olulahlekile ukuqaqa engicabanga ukuthi abantu abaningi be-PR bangakhathalela ukukuthatha - kepha bekungaba kuhle ukuzwa ukuthi kungani bekuzoba kufanele izethameli zami. Amagama ambalwa alula ku-imeyili afana nalawa
Ngiqaphelile Martech Zone ukhulume ngamavidiyo nezokuxhumana esidlangalaleni, ngakho-ke ngicabange ukuthi lokhu kuzokuthakazelisa…
Tags: iphimbo le-bloggerindlela yokufaka iphimboungayifaka kanjani i-bloggerungayifaka kanjani intatheliungafaka kanjani i-influencerintatheli iphimboi-pitchumgqugquzeli we-pitchi-supercool yokudalaphumzilengcube
UJun 16, 2011 ngo-7: 44 AM
Siyabonga ngokwabelana ngalokhu - kuthakazelisa ngempela. Njengomuntu ohlezi ocingweni lwe-PR, futhi njenge-blogger uqobo lwami (yize kungabalulekanga ngokwanele ukuthi kufakwe!), Kuyasiza kakhulu ukubona uhlobo lwezinkundla ezisebenzayo. Ithuba elihle lokufunda, ngakho-ke ngiyabonga!
Into eyodwa engimangazayo nokho iphuzu 5. Ngigijima ithimba elincane kodwa elisebenzayo le-PR / Marketing njengomsebenzi wami wosuku, futhi kwesinye isikhathi ngithola lolu hlobo lwetiyela (futhi kuyaqabukela, ngibenze nabo).
Emigodini engiyenzile, angikaze ngifake uhlobo lolwazi oluqukethwe kuphoyinti 5, ngoba ngicabanga ukuthi abantu engibaphosile bangazicabangela lezi zinto - futhi angifuni ukubatshela ukuthi ukwenza imisebenzi yabo (ngokulinganayo ngiyacasuka kancane lapho abantu bekwenza lokho kimi).
Noma kunjalo, okuthunyelwe kwakho kungenza ngicabange kabusha leso sikhundla!
Ngiyavuma ngokuphelele ngokwenza ngezifiso nokho - kubaluleke kakhulu ikakhulukazi uma kubhekwa isimo esingaxhunyiwe somsebenzi wezokuxhumana 'wanamuhla'.
Ngakho-ke, ngiyabonga futhi!
Jun 16, 2011 ku-12: 41 PM
Ngithatha umbono ophikisayo lapha. Yini ividiyo yezombusazwe nokumaketha kwezenhlalo kwezombusazwe ezihlobene nawe noma i-Marketing Tech blog? # 1 ayiyona "eyomuntu uqobo" eqinisekile ukuthi inegama lakho kuyo kepha ngubani ongakwazi ukuyifinyelela futhi ayingenise ngokuzenzekelayo ku-imeyili (ngicabanga ukuthi umqashi wakho wakudala ulungile kulokho) # 5 Ngivumelana ne-interacter ngokuphelele ngokungafaki lolo lwazi, kufanele wazi indlela engcono yokusebenzisa imininingwane yezethameli zakho kepha isixhumanisi esiya ku-tweet umbono omuhle. Ngokuyinhloko ngoba iningi leminye imikhakha ye-PR iyamunca ayenzi lokhu kube kuhle, kumane kuyenze ibe mnandi kakhulu kunezinye. Lokhu kuphika kungasizakala kangcono ukuya kothile osembusweni wezepolitiki ngombono wami.
Njengomuntu obekela eceleni noma ngubani ozimaketha njengegciwane noma yini ulahlekelwa ukwethembeka kimi (kepha mhlawumbe athola ukuseshwa nama-eyeballs okusebenzisa lelo gama)
Jun 17, 2011 ku-3: 26 PM
Ipolitiki nokumaketha kuhambisana, uChris. Ngingasho ukuthi bekumaketha okwafaka u-Obama esikhundleni. 'Umkhankaso' wakhe wethemba noshintsho udliwe ngabavoti. Ukusetshenziswa kwakhe kwabalandeli nabathonya kwakumangalisa kakhulu, ukunyakaza kwezimpande zotshani. RE: # 1, ngiyavumelana nawe. Iphuzu lami ukuthi uDarci empeleni weza ezosihlola ngaphambi kokuphosa… okuthile okwenziwa yi-batch and blast PR amafemu angakwenzi.
I-Oct 16, i-2014 ku-7: i-22 PM
Ngakho-ke, ungamncoma kanjani umuntu ukuthi enze isixhumanisi sokuphuma se-imeyili uma sibhalelwe umuntu oyedwa (i-blogger noma intatheli) bese sithunyelwa kulowo muntu oyedwa futhi singaxhunyiwe kuhlu olusendaweni yokuthengisa ye-imeyili?
Iningi labasemthethweni be-PR abantu abathumeli izingqimba ze-imeyili ngobuningi ngakho-ke angazi ukuthi ukuphuma kuzokwenzeka kanjani. Ngokusobala, uma inkampani ikubhalisela kuma-imeyili ayo wokumaketha (ngaphandle kokukhetha ukungena kwakho), leyo yindaba ehlukile.
I-Oct 16, i-2014 ku-7: i-53 PM
Sawubona Carri! Empeleni abantu abaningi bomthetho be-PR bathumela ama-imeyili amaningi. Iningi lamapulatifomu e-PR likuvumela ukuthi ukhethe zonke izintatheli zakho nama-blogger bese uthumela. Abanye, njengoMeltwater (umxhasi) banezici zokubhalisa ku-platform yabo kepha iningi labanye alinazo. Uma ungenabo ubudlelwano bebhizinisi, udinga uhlelo oluzongenela ukuphuma. I-Outlook ne-Gmail vele ungayinqumi. Ngicabanga ukuthi enye indlela kungaba ukusebenzisa ithuluzi elifana neFormstack bese nje abantu begcwalisa ifomu (noma iFomu leGoogle kuspredishithi)… kepha lokho kunzima ukulandela umkhondo.